Wasiirka Macdanta iyo Tamarta Oo Xilka U Kala Wareejiyay Wasiir Xigeenkii Hore iyo Wasiiru Dawlaha cusub – Oodweyne Online
Wasiirka Macdanta iyo Tamarta Oo Xilka U Kala Wareejiyay Wasiir Xigeenkii Hore iyo Wasiiru Dawlaha cusub
Hargeysa, Somaliland – Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale, ayaa maanta xilkii ukala wareejiyay Wasiir xigeenkii hore ee wasaaraddiisa iyo wasiiru dawlaha cusub. Munaasibad ay ka soo qayb galeen Madaxda Wasaaradda Macdanta,Wasiiro,Shaqaalaha wasaaradda iyo Marti sharaf kale ayaa labada masuul xilka loogu kala wareejiyay.
Wasiir xigeenkii hore ee Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta, Cabdisalaan maxamed Xasan, haatana ah wasiiru dawlaha wasaaradda biyaha, ayaa u mahadceliyay Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta,Agaasimaha Guud, Agaasime waaxeedyada, Shaqaalaha Wasaaradda iyo Shirkaddaha Shidaal baadhista ee ay wada shaqaynta lahaayeen, iyo waliba Bulshada ay arrimaha khayraad soo saarka ku wacyi galin jireen, kuwaasi oo uu sheegay inay wada shaqayn fiican lahaayeen.
Wasiir xigeenka hore waxa uu ka hadlay arrimaha ugu muhiimsan ee wasaaradda u qabsoomay intii uu joogay “Annagoo ka duulayna Himilada Madaxweynaha ee ah in qarankani gaadho Isku filnaansho Dhaqaale, mid siyaasadeed, mid amni iyo Citiraaf intaba, annagoo fulinayna Siyaasadda Xukumadda ee ah inaan ka faa’iidaysano Khayraadka Illaahay ku manaystay dhulkeena, waxaanu gaadhnay guulo waaweyn oo uu hurmuud noogu ahaa wasiir Xuseen Cabdi Ducaale. Anigoo ah waddan aan la citiraafsanayn ayaanu haddana ku guulaysanay inaanu Shirkaddo Caalami ah ku qancino inay wadanka maalgashadaan oo hadda Xukumaddu dhawr Shirkadood ayay kula jirtaa Heshiis Shidaal baadhis. Waxaanu diyaarinay Xeerarkii Khayraadkaas loo socdo lagu maamuli lahaa. Waxa kale oo noo suuro gashay in Wasaaradda Tamartu yeelato Dhisme weyn oo xarun u noqonaysa oo Madaxweyne xigeenka iyo wasiirku 15-kii bishan dhagax dhigeen, dhismahaas oo noqonaya kii ugu weynaa ee ugu qurux badnaa ee Wasaaraddi yeelato.”
Dr. Maxamed Faarax Ducaale, wasiiru dawlaha cusub ee Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta, ayaa isna halkaasi hadal kooban ka jeediyay waxaanu yidhi “Waxaan mahad u celinayaa Madaxweynaha Somaliland ee xilkan ii magacaabay, waxaanan uga sii gudbayaa inaan balan qaado in xilkaas lay magacaabay aan Umadda ugu shaqeeyo Sinnaan iyo Caddaalad. Wax alle wixii aqoon iyo waayo aragnimo leeyahayna aanan waxba ka hagran. Waxaan jecelahay inaan wasiirkii xilka igu soo dhaweeyay idhaahdo adna waad mahadsan tahay, waxaanan jecelahay inaan halkaas aad soo gaadhsiisay ka sii qaado. Wasiirka wasaaradda, Agaasimaha,Agaasimeyaasha waaxyaha wasaaradda iyo Shaqaalahaba waxaanu u balan qaadayaa inaan si hufan idiinla shaqeeyo”
Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Xuseen Cabdi Ducaale, ayaa gabogabadii Munaasibada waxa uu amaan u jeediyay wasiir xigeenka haatan laga bedelay oo uu sheegay inuu door muhiim ah ka soo qaatay hawlaha wasaaradda gaar ahaana dhanka wacyi galinta bulshada. Waxa uu wasaaradda ku soo dhaweeyay wasiiru dawlaha cusub.
“Waxaan leeyahay intii aanu wada shaqaynaynay wasiir Cabdisalaan, runtii waxa uu ahaa wasiir hawl kar ah oo wixii loo diro ka soo baxa, wax badana wuu nagala qabtay hawl galada wasaaraddu ku jirtay. Waxa aan si gaar ah ugu mahadinayaa Wasiir Cabdisalaan kaalinta libaax ee uu ka qaatay isku xidhka iyo wacyi galinta bulshada, iyo hawsha uu ka qabtay sidii uu bulshada degaanka uga dhaadhicin lahaa muhiimada iyo faa’iidada ay leedahay hawshan aynu wadno ee aynu isleenahay Khayraadkeena dalka ka soo saara” ayuu yidhi Wasiir Xuseen Cabdi Ducaale.